SHEIKH AADAN – SIIRO IYO MASAAJIDKA XAWAADLE « SAWNEWS NETWORK
Somalia: Puntland Minister slammed for releasing “copied” report ... - Garowe Online December 2, 2016Somalia: Parliamentary elections for Banadir region, Somaliland to kick start in Mogadishu - Garowe Online November 30, 2016Somalia: Urgent scale-up of humanitarian assistance needed amid severe drought - Reliefweb December 2, 2016Somaliland Diaspora. The need for a meritocratic benchmark of education and experience - SomalilandPress November 29, 2016
'I never stayed to see if they were dead': Natalia Bolivar, 82, unsentimental about role in Cuban Revolution - CBC.ca December 4, 2016Deadly California warehouse fire: Party venue problems included makeshift wooden stairs - CBC.ca December 4, 2016Was Trump's talk with Taiwan a policy shift or a misstep? - CTV News December 4, 2016Vladimir Putin calls Donald Trump a clever man, says he will understand new responsibilities - Globalnews.ca December 4, 2016Syrian army tells rebels in Aleppo to leave or die - CTV News December 4, 2016Ontario becomes first Canadian province to reject BDS against Israel - Jerusalem Post Israel News December 4, 2016
« Madaxweyne Rayaale oo ku dhawaaqay in beri dalka laga qabanayo xus loogu Baroor –diiqayo 29 October
Xaalada Naxdinta leh ee uu ku sugan yahay Garoonka Diyaarada ee Borama + Sawiro »
SHEIKH AADAN – SIIRO IYO MASAAJIDKA XAWAADLE
Masaagidadu waa meelo dadka muslimiki ihi ilaahay ku baryaan kuna caabidaan. Waa Meelo laga faafiyo nabada, wada noolaashaha, is haqdowrka, daris wanaaga, islaanimada fiican, iyo barashada diinteena. Waligeedna masaajidadu ma ahayn meelo laga faafiyo cadaawad, nacaib iyo siyaasad.
Masaajidada waxa isgu yimaada dadyow kala xisbiya ah, kala siyaaasad ah, kala ujeeda ah, kala dhaqan ah. Waxa kaliya ee ka dheexeeyaa waa towxiidkiida ilaahay, bariyadiisa, barashada qura’aanka, iyo sunnaaha nabigeena (salalaahu calayhi wa sallam). Waxa intaas soo raaca in ummada la qaadhsiiyo sidda dadku nabad ugu wada noolaan lahaayeen iyo sidda nabadu ku jirto ee loo dhexdhexaadin lahaa.
Haddaba, ninkan Sheikh Aaden – Siiro ee ka hadlay masaajidka Xawaadle ee Hargeisa ku yaal maalin ciid ah oo Jimca ah ee ka dhigay masaajidka gole siyaasadeed oo intuu makarafoonka qaatay tufaaya karaahi iyo cadaawad wuxuu la mid yahay mas tufaaya sun. Suntaasi haddi ayna jidhka gelin oo ay kaa haleesho indhaha, waa lagu indhabeelaa. Bal intaanan sii wadin faahfaahintayda, halkan ka akhirista wuxuu wadaadku ku dhawaaqay:
“Waxaad dhegaysanayseen idaacadda VOA-da la yidhaa oo nimankii laayey ee buburiyey kumanaan iyo malaayiin ummadda ka mid ah ee raaraha dhan ku gubi jiray hebel ayaa idin soo dulmaray, oo ka leh khalad dhacay buu ahaa. Ina Saleebaan Dafle markii uu maalintii dhaweyd ka hadlayey idaacadaas 14-kii sheekh dilkoodii, ayaa markii wax laga weydiiyey aayadihii Qur’aanka ee uu beddelay Siyaad Barre, waxa uu ku leeyahay wuxuu ahaa khalad dhacay, Ilaahay baanu ka magangalnay,” ayuu yidhi Sheekh Aadan-siiro, waxaannu intaa raaciyey, “Maanta kuwa joogaa waxay samaynayaan taariikh cusub oo wixii ummaddani lahayd ee lagu jabay ee dulmi badani ka dhacay ayaa la doonayaa in taariikh cusub loo sameeyo, xitaa kuwa VOA-da sheegayaan waa kooxo cusub oo is urursaday oo taariikh cusub ummadda u samaynaya. Idaacadihii dadku lahaayeen ee xaqa u dirirayey, bal eeg maamulka maanta jira VOA-da halkan ayaa laga siiyey, kuwaa waxa kale uga sheekaynaya carruurteena wixii Hargeysa iyo Burco lagu sameeyey, waxaannu u soo joognay 50 nin oo haldoorkii ummadda ah oo iska shaqaysanaya oo mid mid loo gowracay oo cid allaale ka hadlaysaa aanay jirin, tii baa maanta inta mid wadaad ahi intuu gadh la soo baxay ayuu diin ka hadlayaa, adeer maxaad uga hadliwayday maalintii hore ee dadka la laynayey.”
Sheekh Aadan X. Maxamuud waxa uu ku eedeeyey xukuumadda Madaxweyne Rayaale inay cadaadis iyo xadhig joogto ah ku hayso warbaahinta dalka ee caalamka u bandhigi lahayd dhibaatadii dalka loo gaystay iyo dulmiga lagu hayo.
“Waar maanta ayaa idaacado la inoo samaystay la leeyahay Cali Samatar baa halyey ahaa, kuweenii ka hadli lahaana dawladdu way hortaagan tahay, inamadii iska celin lahaa ee taariikhda ka warami lahaa ee dunida u warami lahaana kuwaa ay cabudhinayso ee la leeyahay ma hadli kartaan iyo xidha, ka leh Cali Samatar iyo Siyaad Barre halyey buu ahaana halkan baa intaynu VOA-da FM u dhignay aanad Radio Hargeysa ka dhagaysan karayn. Telefishanka Horn Cable Tv wad ogtihiin waatii la xidhay, waa kuwii Somaliland difaaci lahaa, xitaa Maraykankii ayey la murmeen oo ay yidhaahdeen waar maxaanu ku cadilanahay, haddana waa kuwii maalintii dhaweyd wax bay naga sheegeen lagu xidhayey. Haddii aynu kuweena [warbaahinta] curyaamino kuwaasaa ina qabsan aad weliba tas-hiilaadka u samaynaysaan ee meel walba ka hadlaya. Waataa maanta Cali Samatar oo Maraykan joogaa ku faanayo aniga ayaa Hargeysa dumiyey oo amar madaxweyne ayey ahayd. Saddex milyan badh dad ah ayaa cid u jawaabta la waayey, kuwii u jawaabi lahaana waynu cabudhinaynaa. Markaa taariikh cusub ayaa la samaynayaa, haddii aanad gar sheegan, waxaynu awoodi kari la’nahay in xasuuqeenii qorno, taariikhdii dulmiga ee inagu dhacday ee Hargeysa iyo Burco oo dhan lagu dumiyey, dadkii la laayey iyo xabaalihii xasuuqa taariikhdoodii in aynu qorno oo aynu dunida u sheegno,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.
Sheekhu waxa kale oo uu khudbadiisa kaga hadlay saddexda xisbi ee ku loollamaya talada dalka oo uu ku tilmaamay qaar dantooda mooyee aan horumarka dalka iyo shacabka midna ka shaqaynayn, isla markaana dulmi ku haya shacabka.
“Maanta saddexda xisbi ee dalka taladiisa doonaya haddaad tidhaahdo waan kaa tirsanahay, waan idin taageersanahay, idiinka idin dabagalayaa waa lagu jecelyahay, haddii aad tidhaahdo waan idin kama mid ahi ee waan toosinayaa oo ummadaan u dhexeeyaa waxaad tahay cadowgooda. Waxaana weeye sharciga ay samaysteen ee ay ummadda ku maamulayaan ayaa markiisa horeba dulmi ku dhisan.”
“Dalka gebigiisaba haddii shan qof oo Ilaahay garanaya loo dhiibo waa la masruufi lahaa dadka oo dhan, laakiin ma doonaysaan isbeddel oo reer hebel iyo magacyo beri hore la seexday ayaad ku wareegaysaan. Waxaanay inala sugayaan inta ay xoogaysanayaan kuwaa meelwalba inaga saarani intay is haystaan,” ayuu hadalkiisa ku soo gebogabeeyey Sheekh Aadan-siiro.
Wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu u jeedo bal u fiirsada oo indinka oo ka daacad ah dinnteena iyo wuxuu ina faray Rasuulkeena suubani ka jawaaba mowqifka wadaadkani. Waa wax jira in dad iyo duunyo badan aan ku waynay halgan kii gobanimadoonka. Qof kasta oo Somaliland ka mid ihina uu xassuusan yahay tarriikhdii ina soo martay iyo dadkii ka masuulka ahaa dimashadii iyo burburkii ina soo gaadhay. Umadu iyada oo ka siman arintaas ayey sanad walba xussaan dadkii ku dhintay halgankaas. Taarikhda Somaliland marka laga hadlaayo micneehdo maaha in badh laga saaro. Waa in kuwii jagooyinka ka hayey maamulkii Siyaad Barre lagu soo magaabaa oo dadweynha la xussussiyaa in dadkaasi ka masuul ahaayeen wixii dhimasho iyo aduun burbur inaga soo gaadhay nidaamkaa hore.
Arimaha ina soo maray iyo kuwa an ku jirnaaba uma baahna wadaad waranle waxay u baahan yihiin musheekh cilmi u leh diinta islaamka iyo sunnihii Nabigeena( SCW ) oo ku waaniya ummada sidii ay uga shaqayn lahaayeen maslaxadooda iyo nabad ku wada noolaashadooda ku dhisan daacad iyo daacad ka talis. Uma baahnin suufi ku shaqaysta diinta islaamka oo marka laba reer is hayaan u kala eexda, siyaasada wadanka ka jirtana dhex dabaasha oo kolba xisbiga xiisad iyo fidno abuurayaa taageera. Sheikha daacada ka ah diinteeno waa in u af gaabanaadaa, xaqdhowr yeeshaa , ka taliyaa nabada, ka taliyaa cadaalada uu ka gaabsadaa siyaasada iyo xumaantaba.
Sheikhani wuxuu noqday”jack of all trade”. Shalaybay ahayd markuu lahaa reer xareedbaa sax ah ee dhulkooda ha loo soo celiyo. Maanta ayuu leeyahay dowladaa xun, xisbiyadaa xun, madaxdaa xun, siyaasadaa xun. Wadaadkan bad walba dabaalanayaa xaguu inoo wada. Waxa ka muuqata in u waxyaaba kale iyo meela kale tiigsanaayu. Sheikhayada daacadi ihi way qaboojiyaan dhibaatooyinka ummada ama reeraha dhextaal. Ninkani waxan ka gaynwaayey in u ku xidhanyahay kooxaha baabi’iyey Somalia. Ma wuxuu ka tirsanyahay Xisb ul Islaam mise Al Shabaab? Afcaashiisa oo dhan ayaa tilmaam ku leh waxay qolooyinkaasi ku kacaan waayo dabuu mar walba huriyaa. Wadaadkani wuxuu sawaabiyaa guulwadayaashi Siyaad Barre ee beenta ku noolaa. Waxa la odhan jiray marka la arko wadaad yara kacsan: wadaadku uu xayraansan yahay. Markaa ha la hubsadu cafimaad qabkiisa.
Quraanka lama badali karo waayo ilaahybaa balan qaaday. Ilaahy wuxuu quraankiisa ku sheegay: Anakaa soo dejinay anagaana xafidayna. Period. Ilaahay ha ina waafajiyo wixii fiican umadeenana ha isku soo hadeeyo, wixii wax isku haystana ha tuso suluxa wanaagsan. Ilaahay ha u naxariistu kuwi ku dhintay halgani ama gacantii SNMtaba, inagana ha inooga daba naxariisto. Ameen.
This entry was posted on October 28, 2009 at 11:16 am	and is filed under Articals.